DJ တီးကာ ကမ္ဘာပတ်ပြီး ဖျော်ဖြေရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ချပြလိုက် မိန်းမလှလေး DJ Soda - Cele GabarCele Gabar
DJ တီးကာ ကမ္ဘာပတ်ပြီး ဖျော်ဖြေရတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ချပြလိုက် မိန်းမလှလေး DJ Soda
Published: April 9, 20196:15 pm
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသူတွေရဲ့ အလှသတင်းကြီးသူတွေထဲမှာ တစ်ဦး အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ DJ Soda ကတော့ သူမရဲ့ ကြည်လင်လှပတဲ့ အသားအရေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နာပေါက်လေးနဲ့ တကယ့်ကို ပရိသတ်တွေကို အမြဲဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူပါ။ရှားရှားပါးပါး မိန်းကလေး Dj တွေထဲက အမိုက်စားနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကျော်ဖြစ်တဲ့ DJ Soda ကတော့ (၁၉၈၆)ခုနှစ် ဧပြီ (၇)ရက်နေ့ မှာ တောင်ကိုရီးယား၊ဆိုးလ်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ တော့ အသက်(၃၃) နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၃၂) နှစ်လို့ မထင်ရလောက်အောင် ဆက်ကျော်သက်လေးအလား ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသလို DJ Sodaရဲ့ နောက်ထပ် ဆုလာဘ်တစ်ခုကတော့ လှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကောက်ကြောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းပါပဲ။ လှပပြီး စီးမျောဖွယ်ကောင်းတဲ့ သံစဉ်နဲ့ Beats တွေကို စင်မြင့်ထက်မှာ ဖန်တီးရင်း သူမရဲ့ sexy ကျတဲ့ အကအလှတွေကြောင့် ပိုကြွေပြီးရင်း ကြွေနေရသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အာရှ ဂီတလောက မှာ သာမက ယူရို DJ လောကထိ နာမည်ကြီးသူလေးဖြစ်သလို ငယ်ရွယ်နုပျို ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Sexy ကျကျ အလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်။
အာရှရဲ့ အတော်ဆုံးနဲ့ အလှဆုံးအမျိုးသမီး DJ(၁၀)ယောက် စာရင်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်က ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ဒီနှစ်စာရင်းမှာတော့ DJ Sodaတစ်ယောက် ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ အမျိုးသမီး DJ တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူမဟာ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့
ကမ္ဘာတလွှားက မလေးရှား၊ ဂျပန်၊ ကွာလမ်လာပူ၊ မီယာမီ မြို့ အစရှိတဲ့ မြို့တွေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဖျော်ဖြေနေတာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ DJတစ်ယောက် ရဲ့ဘ၀ကို Video လေးနဲ့ ကတွ ချပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးတို့ရေ .. Soda လေးကို ချစ်ကြတယ် မဟုတ်လား..?
DJ SODAX AIR ASIA FEAT.Kuala Lumpur With Tinie Tempah
디제이소다 X 에어아시아
Posted by DJ SODA on Monday, April 8, 2019
source: DJ soda;
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံသူတှရေဲ့ အလှသတငျးကွီးသူတှထေဲမှာ တဈဦး အပါအဝငျဖွဈတဲ့ DJ Soda ကတော့ သူမရဲ့ ကွညျလငျလှပတဲ့ အသားအရနေဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မကျြနာပေါကျလေးနဲ့ တကယျ့ကို ပရိသတျတှကေို အမွဲဆှဲဆောငျထားနိုငျသူပါ။ရှားရှားပါးပါး မိနျးကလေး Dj တှထေဲက အမိုကျစားနဲ့ ပုရိသတှရေဲ့ အသညျးကြျောဖွဈတဲ့ DJ Soda ကတော့ (၁၉၈၆)ခုနှဈ ဧပွီ (၇)ရကျနေ့ မှာ တောငျကိုရီးယား၊ဆိုးလျမွို့မှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး လကျရှိမှာ တော့ အသကျ(၃၃) နှဈရှိပွီ ဖွဈပါတယျ။
အသကျ(၃၂) နှဈလို့ မထငျရလောကျအောငျ ဆကျကြျောသကျလေးအလား ငယျရှယျနုပြိုမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားသလို DJ Sodaရဲ့ နောကျထပျ ဆုလာဘျတဈခုကတော့ လှပတဲ့ ကိုယျခန်ဓာကောကျကွောငျးကို ပိုငျဆိုငျထားခွငျးပါပဲ။ လှပပွီး စီးမြောဖှယျကောငျးတဲ့ သံစဉျနဲ့ Beats တှကေို စငျမွငျ့ထကျမှာ ဖနျတီးရငျး သူမရဲ့ sexy ကတြဲ့ အကအလှတှကွေောငျ့ ပိုကွှပွေီးရငျး ကွှနေရေသူလေးလညျးဖွဈပါတယျ။ အာရှ ဂီတလောက မှာ သာမက ယူရို DJ လောကထိ နာမညျကွီးသူလေးဖွဈသလို ငယျရှယျနုပြို ပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ Sexy ကကြ အလှကို ပိုငျဆိုငျထားသူလေးဖွဈပါတယျ။
အာရှရဲ့ အတျောဆုံးနဲ့ အလှဆုံးအမြိုးသမီး DJ(၁၀)ယောကျ စာရငျးမှာ ၂၀၁၇ ခုနှဈက ပါဝငျခဲ့ပမေဲ့လညျး ဒီနှဈစာရငျးမှာတော့ DJ Sodaတဈယောကျ ပါဝငျခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။ အမြိုးသမီး DJ တဈယောကျအနနေဲ့ သူမဟာ လကျရှိမှာ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ အမြိုးသမီး တဈယောကျအနနေဲ့
ကမ်ဘာတလှားက မလေးရှား၊ ဂပြနျ၊ ကှာလမျလာပူ၊ မီယာမီ မွို့ အစရှိတဲ့ မွို့တှကေို ဖွတျကြျောပွီး ဖြျောဖွနေတောဖွဈပွီး သူမရဲ့ ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ DJတဈယောကျ ရဲ့ဘဝကို Video လေးနဲ့ ကတှ ခပြွလိုကျတာဖွဈပါတယျ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးတို့ရေ .. Soda လေးကို ခဈြကွတယျ မဟုတျလား..?
Previous Previous post: “ဘရူနိုမားစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေ”
Next Next post: “ကပ္ပတိန်အမေရိကကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်လုံးဝမသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာများ “
ပရိသတ်များ လူသိနည်းကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးကျင်းပခဲ့သော Star Awardsရဲ့ ဆုတံဆိပ်အကြောင်း
Published: April 7, 20196:47 pm
တစ်ကျော့ပြန် ပရိသတ် အားပေးမှု ရရှိလာခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ ဒေါ်မြတ်မွန် ရဲ့ အနုပညာခရီးလမ်း
Published: March 16, 20191:43 am Updated: March 17, 20194:36 pm
မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်း ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အလှမယ် ထက်ထက်ထွန်း
Published: March 16, 201911:20 am